> Resource > Talooyin > Kan sameeyey Best Photo Muqaal: Sida loo sameeyo Photo Muqaal ah
Weligaa ma laga qaaday sawiro aad u badan oo ah qoyskaaga, saaxiibadaa iyo xaflado gaar ah? Madadaalo ka buuxo Hal hab oo iyaga la wadaago waa in ay sameeyaan slideshow sawir. Taasi waxay ka caawisaa dib xusuusta ee noloshaada. Waa maxay dheeraad ah, waxa oo dhan waxaa la samayn karaa in yar qasabno fudud haddii aad isticmaasho gaare slideshow sida Fantashow iyo DVD Slideshow Builder Deluxe . Iyadoo mid ka mid ah labadan barnaamijyada, waxaad si fudud u xuub kartaa sawiro iyo video galay shaqada farshaxanka yaabiyo qof. Halkan aan aragno sida ay si fudud iyo hal-abuur la sameeyo slideshow sawir iyo gubi in DVD leh, kuwaas oo dhan-in-ka mid ah qalabka slideshow.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo slideshow sawir leh Fantashow
Qeybta 2: Sida loo sameeyo slideshow sawir leh DVD Muqaal dhise ah
Fantashow kaa caawin karaan inaad si deg deg ah uga dhigi slideshow sawir. Waxay bixisaa 200+ Hababka video cajiib ah munaasabadaha kala duwan. Hadda ka soo dejisan iyo arko sida loo sameeyo slideshow sawir la.
Tallaabada 1 Dooro Video Style ah
Gal Fantashow, oo isla goobtii ka heli ka badan 200 oo cajiib ah Hababka video maktabadda. Soo qaado style aad jeceshahay oo guji "codsan" si ay u bilaabaan samaynta slideshow sawir.
Tallaabada 2 Import Photos iyo shakhsiyeeyo Style ee
Tag ah "shakhsiyeeyo" tab in ay dajiyaan sawiradaada. Waxaad si toos ah jiidi karaan jeedi files si aad u style in lagu dabaqay storyboard ah. Markaas muddada sawirrada dhigay haddii aad u baahan tahay. Waxaad kaloo isticmaali kartaa qalabka tafatirka dhisay-in si noola, isku shaandheyn ama ku darto saamaynta in files bartilmaameedka. Si slideshow sawir aad ka sii cad ah sameeyaan, swith in ay tan kale ku darto music, qoraalka, Intro / credit ama Hababka dheeraad ah oo aad jeceshahay.
Tallaabada 3 Share Your Photo Muqaal Kolkiiba
Marka aad samaysay, bedesho ah "Dhoofinta" tab. Waxaad si Qalabka telefoonada gacanta ama your computer badbaadin karo shuqulladiinna, si toos ah boostada video ay u YouTube ama Facebook, gubi in DVD sida keepsake ah. Doorashadaada!
Download iyo orod DVD dhise slideshow , ka dibna raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida loo sameeyo slideshow sawir.
Tallaabada 1 dar sawir ama video files si gaare slideshow photo
Ka dib markii socda gaare slideshow sawirka, waxaad bilaabi doonaa ka tab "Abaabulaan". On interface ka, waxaa jira laba badhamada Files Add mid ka mid ah oo aad riixi kartaa in aad ku darto sawiro iyo videos aad. Markaas kaliya jiidi oo hoos u photos videos ama si aad u sameysato ay si on storyboard. Haddii aad rabto in aad xaalkaa photos ah, guji "Edit" in lagu daro saameynta, sawiro dalagga, dayactirka red-indhaha ama ku darto caption.
Talo: In viewe badan oo dhan faylasha, riix "ballaariyo" button on geeska midig ee sare storyboard.
Tallaabada 2 Habee slideshow sida asalka music iyo kala guurka
Marka loo dhoofiyo faylasha aad, in ka badan 100 saamaynta guurka lagu kala sooc lahayn oo si toos ah u isticmaali doonaa inta u dhaxaysa laba sawir kasta ama video. Si kastaba ha ahaatee, waxaad mar walba iyaga u beddeli karo "shakhsiyeeyo" tab. Just jiidi oo hoos u kala guurka ah ka mid ah liiska in thumbnail u dhexeeya labada raaceyso. Waxa kale oo aad ku dari kartaa saamaynta, dhaqaaq ama Intro / credit sida aad jeceshahay.
Ku darista music aad bay u xoojin karto Vibe ee slideshow sawir aad. Si taas loo gaaro, guji "Music" on storyboard ah. Tani slideshow gaare sawir gelineya inaad ku darto dhawr xabbadood oo kala duwan oo music sida ay baahidaada. Haddii aad rabto in aad ku darto oo aad cod u gaar ah, riix "Voice ka badan" si rikoor ka dibna waxa ay sii kordhineysaa in ay slideshow ah.
Tallaabada 3 Samee slideshow photo oo ayan u hurin si DVD
Tag tab ee "Samee" iyo riix "Kulanka Xiisaha Leh" badhanka si ay u hubiyaan slideshow sawir ah ay wanaagsan tahay. Dib u tag shakhsiyeeyo tab in la beddelo haddii loo baahdo. Marka aad ugu faraxsan yihiin natiijada, xusho fursadaha bidixdiisa inay u dhoofiyaan slideshow photo in DVD, PC, kombuyuutarrada gacanta, iwm Waxaad sidoo kale si toos ah slideshow gali kartaa in Youtube oo fariin u soo dir Facebook iyo Twitter saaxiibo.
Haatan fadhiisan oo aad nasato, waxay qaadan doontaa oo keliya halka si aad u hesho slideshow sawir aad u la wadaago meel kasta.